Nekuburitswa kweIOS 13, ini ndinogadziridza kana kudzorera kubva pakutanga? | IPhone nhau
Nekuburitswa kweIOS 13, ini ndinogadziridza kana kudzorera kubva pakutanga?
Ignacio Sala | | iOS 13, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Gore rega rega Apple inoburitsa vhezheni itsva yeIOS, macOS, tvOS, uye watchOS. Iyo iPhone, seMac, ndiwo marongero anogona kutambura zvakanyanya nekufamba kwenguva mune iyi pfungwa, kubvira gore rese, tinoisa uye tinodzima nhamba hombe yekushandisa.
Nehurombo, kana tikabvisa maapplication atisingafarire, panogara paine mafaira emuchina wedu. Iwo mafaera, nekukurumidza kana gare gare anogona kunetsana nemamwe mashandisirwo uye yedu iPhone kana Mac, kukonzera kusashanda kwechishandiso chedu.
1 Kwidziridza kana kudzoreredza, yekutanga backups
2 Simudzira kune iOS 13
3 Isa iOS 13 kubva pakutanga
4 Usadzorere backup
4.1 Bvisa Mapikicha uye Mavhidhiyo kubva ku iPhone kubva paWindows
4.2 Bvisa iPhone Mifananidzo uye Mavhidhiyo kubva kuMac
5 Kopa mifananidzo uye vhidhiyo ku iPhone
Kwidziridza kana kudzoreredza, yekutanga backups
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita tisati tavandudza chero chishandiso kune itsva vhezheni yeinoshanda system kuita kopi yekuchengetedza. 99% yenguva, maitiro haawanzo kutadza, asi panogara paine 1%.
Kana isu tiine rombo rakaipa rekuti mudziyo wedu haupedze iyo yekumisikidza nenzira nemazvo, yakaturika kana kupinda isingagumi reboot zvishwe, isu tinomanikidzwa kudzoreredza chishandiso kubva pakutanga, saka tiri kuzorasa ruzivo rwese rwatakachengeta mukati.
Kana isu takatora chengetedzo yekuita backup kana kuti iCloud yakamisikidzwa kune edu ese mafoto nemavhidhiyo (ayo pakupedzisira anogara ari akakosha chinhu) hapana dambudziko. Asi kana zvisiri, tinofanira kuziva izvozvo hapana nzira yekutora zvese zvirimo, kunyangwe hazvo mamwe mafomu achiti anokwanisa kuzviita.
Simudzira kune iOS 13
Zvakananga kuvandudza chishandiso chedu kuIOS 13 ndiyo kukurumidza nzira Kugona kunakirwa imwe neimwe yenyaya dzinobva mune iyi nyowani vhezheni yeIOS 13, sezvo isu tichifanira chete kubatanidza yedu iPhone kana iPad kunejaja uye kurodha pasi nekumisikidza iyo nyowani vhezheni zvakananga kubva pachigadzirwa.
Hatifanirwe kudzoreredza kunyorera.
Iko hakuna dhizaini yekumisikidza.
Kuita kwechigadzirwa kunogona kukanganiswa.
Iko kudzikama kwevamwe kunyorera kunogona kuve dambudziko.
Junk mafaira ezvese zvinoshandiswa nemitambo yatakamboisa uye kudzima zvinochengetwa.
Isa iOS 13 kubva pakutanga
Kubva kuActualidad iPhone, tinogara tichikurudzira gadza shanduro nyowani dzeIOS kubva pakutanga iyo Apple inotanga gore rega rega, saka isu tinodzivirira kukwevera zvinokwanisika zvinetswa zvekushanda zvatingave nazvo nekudaro tichidzivirira matambudziko, sezvo tichiona kudhonza mafaira ekushandisa ayo asisiri pafoni yedu.
Hapana mashandiro kana kugadzikana nyaya, kupfuura maapplication asingaenderane neIOS 13.
Isu tinobvisa mafaera ese asina basa emaapplication ataive taisa, isu tanga tadzima kana atisina kushandisa.
Dzorerazve maapplication uye unofanirwa kuagadzirisa.
Iyo inononoka maitiro uye inotora yakawanda nguva kupfuura kugadzirisa zvakananga kuIOS 13.
Pakati pemazuva mashoma ekutanga, chishandiso chinogona kuratidza bhatiri kana matambudziko ekuita, kudzamara zvese zvemukati manejimendi maitiro akajairwa.
Backup makopi anotibvumidza isu kudzoreredza chishandiso kune imwechete mamiriro zvayaive musati yamira kushanda. Ma backups ayo iTunes neICloud anogadzira edu emidziyo sanganisira zvese zvako zvemukati. Nenzira iyi, pasina kudzoreredza chishandiso chedu, ichatiratidza ruzivo rwese uye zvemukati izvo zvichawanikwa pane chishandiso patakaita backup.
Kana isu takazopedzisira tasarudza kuita zero kugadzwa kweIOS 13, hatifanire kudzoreredza backup, kubvira taidhonza matambudziko ese, iripo uye yemberi, yataive nayo neIOS 12.
Apple inotipa 5 GB yemahara yekuchengetedza nzvimbo, uye neyatinogona kuita backup yemagenda edu, vanobatika, manotsi, data rehutano, zviyeuchidzo, mabhukumaki eSafari, mapassword nezvimwe zvishoma. Kana tichida kugadzira kopi yemapikicha edu nemavhidhiyo, isu tinofanirwa kuenda kunotora uye tinotora nzvimbo yekuchengetera.
Kana isu tiine nzvimbo yekuchengetera muICloud, zvese zvirimo zvemuchina wedu zvichave zviri muApple gore, saka hapana chikonzero chekuchengetedza, Chero bedzi maapplication ese atinoshandisa anoenderana neICloud kuchengeta mafaera ako. Kana tangoisa iOS 13, zvese zvirimo zvinozotorwa pasi otomatiki kune edu terminal.
Kana iwe ukashandisa iyo 5 GB iyo Apple inopa mahara kuchengetedza iyo data yandakataura mundima yapfuura uye iwe yaunoda Dzosera mudziyo wako kubva pakutanga pasina kurasikirwa nemifananidzo uye mavhidhiyo, unofanira kugadzira kopi yadzo usati wadzorera.
Bvisa Mapikicha uye Mavhidhiyo kubva ku iPhone kubva paWindows
Kuti uwane mifananidzo nemavhidhiyo atakachengeta pane yedu iPhone, isu tinofanirwa kuve neimwe vhezheni yeTunes yakaiswa, haifanirwe kunge iri yekupedzisira, sezvo isu tisiri kuzoishandisa.
Isu tinobatanidza yedu iPhone kuPC uye isu tinomirira chikwata chitsva kuti chiratidze pachikwata chedu.
Nekudzvanya pane izvo nyowani nyowani, isu tinongowana chete mifananidzo nemavhidhiyo akachengetwa pane yedu kifaa.
Isu tinongofanirwa kufamba nemafolda akasiyana kusvika tsvaga zvirimo zvatinoda kutora.
Bvisa iPhone Mifananidzo uye Mavhidhiyo kubva kuMac
Isu tinobatanidza iyo iPhone kune Mac.
Isu tinovhura iyo Launcher yeApplications, vhura iyo Vamwe folda uye tinya pa Screenshot.
Ipapo zvicharatidza zvese zvemukati zvekuteerera yatinayo mumuenzaniso wedu wakasarudzika.
Kuti tiibudise, tinofanirwa kusarudza zvese zvirimo uye dhonza kuenda kufolda kwatinoda kuichengeta.
Kana iwe uine kusahadzika nezvekutevera chero nhanho dzandakaratidza muchinyorwa chino, usazeze kundibvunza kuburikidza nezvakataurwa. Iniwo ndinokukoka iwe kuti usiye mune zvakataurwa iyo kusahadzika kwaungave uine izvo zvisina kugadziriswa muchinyorwa.
Kopa mifananidzo uye vhidhiyo ku iPhone
Paunenge iwe waita kopi yemifananidzo yese nemavhidhiyo ataive nawo pane yedu kifaa uye isu tavandudza kuIOS 13, inguva yeku teedzera iyo yese mifananidzo nemavhidhiyo kudzokera ku iPhone yedu, chero bedzi isu tichida kuva navo nguva dzose.
Maitiro ekuzviita akapusa uye inoda komputa ine iTunes Kuti uite kudaro, komputa pane iyo mifananidzo nemavhidhiyo atinoda kuteedzera aripo.
Tevere, tinobatanidza yedu iPhone kana iPad kune komputa, vhura iTunes uye sarudza iyo mudziyo icon inoratidzwa muapp.
Mukoramu yekurudyi, tinya Mapikicha. Isu tinotarisa bhokisi Sync photos uye sarudza dhairekitori kubva kwatinoda kuteedzera mifananidzo kune iyo iPhone
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 13 » Nekuburitswa kweIOS 13, ini ndinogadziridza kana kudzorera kubva pakutanga?
Unogona here kugadzirisa kubva ku0 uye usarasikirwe nehutano data?
Dhata rehutano rakachengetwa muICloud, pamwe chete nehukama, karenda, nezvimwe. Paunoshandisa kubva pakutanga, uye shandisa iCloud, iyo data inotorwa otomatiki. Izvo hazvina basa kana iwe uine iyo 5 Gb yemahara pane 2 TB.
Ok, Ndatenda zvikuru nekupindura.
Saka kana ndikagadzirisa ndikaisa kopi yakachengetedzwa yeICloud ndinogona zvakare kurodha pasi zvikanganiso zvataurwa mune ino chinyorwa uye mafaera ekushandisa ayo asisiri pachigadzirwa.
Uye kana uchigadzirisa uye kudzoreredza se iPhone nyowani uye nekuisa yangu Apple id mairi pasina kuisa iyo iCloud kopi mairi, unowana vanofambidzana, karenda uye hutano? Zvandaizoda zvakanyanya.
Kwakarurama. Backup chinhu chimwe chete, paICloud kana iTunes. Uye chimwe chinhu data rakachengetwa mugore rakazvimiririra.
Mukati meiyo iCloud marongero, iwe unogona kumisa kana kumisa iyo data iwe yaunoda kuchengetedza (karenda, hutano, mabasa, kutaurirana ...). Ita shuwa kuti une Health bhokisi rakaongororwa.
Ok ndatenda futi,
Uye pakupedzisira wobva wadzoreredza se iPhone nyowani woisa ID yangu yeApple pasina kuisa iyo kopi yeICloud, unowana vanofambidzana, karenda uye hutano?
Iyo data inosangana neiyo ID ichatorwa. Asi iwe unofanira Activate iCloud kwavari kudhanilodha. Iyo yazvino inomisikidza iyo, asi haina kumbokuvadza kuitarisa.
iOS 13 yave kuwanikwa kune vese vashandisi
Shazam inogadziridza ine yakasviba modhi uye nyowani dzekugovana rwiyo sarudzo